Fanaanad Qaran – Saada Cali Oo Shil Gaadhi Ku Dhaawacantay Wadada Gaalkacyo – Garowe | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, WARARKA	> Fanaanad Qaran – Saada Cali Oo Shil Gaadhi Ku Dhaawacantay Wadada Gaalkacyo – Garowe
Saturday, July 21, 2012 Laaska News
Garowe (July 20) Fanaanada caanka ah ee Saada Cali Warsame ayaa ku dhaawacantay shil baabuur halka uu qof ku dhintya shilkaa,laba kalana ay ku dhaawacmeen.Waxaana lagu soo waramayaa inay qabto dhaawac fudud,ayna ka jabtay gacan,qoortana wax ka qabto, ayna miyir qabto ayna hadlayso, sidoo kalena ay taahayso!.
Saada Cali Warsame ayaa kamid ahayd fanaaniintii Qaranka Soomaaliyeed ee hobolada Wabari, waxayna ahayd fanaanad caan ah oo aad looga yaqaanay Soomaaliya,waxayna inta dambe kunoolayd dibadaha in kastoo ay aad ugu xidhnay dalka iyo isbadalada kasocdayba.
Shilkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay galabta meel ujirta Garowe 45 Km laguna magacaabo birta dheer, kuna taal wadada laamiga ah ee isku xidhta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garowe.Waxaa lagusoo waramayaa in shilku yahay laba baabuur oo dusha iska maray oo midi yahay gaadhi xamuul ah,halka ka kalana uu yahay kii ay saarnayd fanaanadda Saada Cali oo ahaa Gaadhi Landcruser ah.
Waxaana la sheegay in shilku ahaa shil culus ilaahayse yareeyay qasaarihiisa marka loo eego sida shilku u dhacay.
Shilkaas waxaa ku dhintay hal qof waxaana ku dhaawacmay 3 qof oo ay kamid tahay fanaanadda caanka ah ee Soomaaliyeed Saado Cali Warsame ayna qabto jabniin gacan ah, ayna hadlayso,“labada qof oo kale ayaa la sheegay inay yihiin laba qof oo dhalin yaro ah xaaladdadooduna ay culus tahay” waxaana dhammaantood la dhigay Isbitaalka Guud ee Garoowe oo lagu dawaynayaa.
Sida uu ku waramay wariyaha BBC da ee Puntland Axmed Maxamed Cali oo xaaladda shilkaas uga waramay Farxaan,warkaasna lagu sheegay warka habeenimo ee Idaacadda.Wariyuhu waxa uu sheegay in uu booqday Isbitaalka Guud ee Garowe ee la dhigay dhaawaca.
Wariye Axmed oo u soo tabiyanaya Farxaan warka kusaabsan shilkaa waxaa hadaladiisa kamid ahaa:
Galabta 5 tii galabnimo ayaa gaadhi ay lasocoto fanaanadda Saada Cali Warsame iyo mid kale oo kasoo tagay magaalada Gaalkacyo waxay shil ku galeen meel magaalada Garowe ujirta 45 KM,gaadhigii ay wateen iyo gaadhi kale oo xamuul ah ayaa isku dhacay,shilkaas waxaa” ku dhintay hal qof “, waxaa “dhaawac kasoo gaadhay saddex qof oo kale oo ay ku jirto Saada Cali Warsame”,waana la soo qaaday, waxayna hadda kusugan yihiin Isbitaalka Guud ee Magaalada Garowe halkaas oo lagu dawaynayo.
“Laba qof oo dhalinyaro ah ayaa dhaawacoodu aad uliitaa”,waxaana “ugu roon ilaa hadda saada cali”.
Farxaan:Dhaawaca ay qabto intee la’egyahay?
Farxaanaw saada dhaawaceeda waan arkay wey miyir qabtaa ilaa hadda,gacan ayay kajabtay,surka ama qoorta dhaawac ayay kaqabtaa.
Dhakhaaatiirta ku mushquulsan ee dawaynaysa oo isugu jirta Soomaali iyo Caddaan waxay ii sheegeen in dhaawceedu uu fudud yahay oo ilaa iyo iminka aysan wax halis ah aysan qabin , way miyir qabtaa, wayna hadlaysaa,weyna taahaysaa —
Waxaa kale oo uu sheegay in meel kale ay wax kaqabto laakiin aan si fiican anigu umaqli waayay ama ukala saari waayay- (dhanka midig, dhabanka midig, dhabarka midig) midkood.
Waxaannu Ilaahay ugu baryaynaa in Ilaahay caafiyo dhammaan intii shilkaa wax ku noqotay,intii dhimatayna ilaahay samir iyo Iimaan kasiiyo eheladoodii.
Waxaan ku baaqaynaa in dhaawaca loo gurmado,sidoo kalana aan lasahlan dhaawaca lagu sheegay Saada Cali ee Qoorta ama surka qofba sida uu u yaqaan.
Sidoo kalana aanba la sahlan qofka haddii uu ka sheegto ama wax ka gaadhaan madaxa,jeegada,qoorta, dhabarka ilaa lafta lagu fariisto.
Syrian troops take control over Damascus neighborhood RAMADAAN Mubaarak